Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » I-China isusa i-Boeing 737 MAX ibuyele esibhakabhakeni sayo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abaqhubi beenqwelomoya baseTshayina kuya kufuneka bagqibe uqeqesho olutsha ngaphambi kokuba iinqwelomoya zorhwebo ziqale ngelixa iBoeing ifuneka ukufaka isoftware eyongezelelweyo kunye nezinto.
The Ulawulo lwezoLuntu lwaseChina (CAAC) ibhengezwe namhlanje ukuba ikhathazekile I-Boeing 737 MAX iijethi ziye zacocwa ukuba zibuyele ekubhabha e-China-intengiso enkulu yokugqibela apho inqwelomoya yayilindele ukuvunywa.
I-China ineyona inkulu 737 MAX inqanawa emva kwe-US, kunye neenqwelomoya ezingama-97 eziqhutywa ngabathwali be-13 ngaphambi kokumiswa.
“Emva kokwenza uvavanyo olwaneleyo, I-CAAC ibona amanyathelo okulungisa anele ukulungisa le meko ingakhuselekanga,” utshilo I-CAAC yatsho kwiwebhusayithi yayo, iphelisa phantse iminyaka emithathu yokuvalwa kwenqwelomoya eTshayina.
Ngokutsho I-CAAC, Abaqhubi beenqwelo-moya baseTshayina baya kufuna ukugqiba uqeqesho olutsha ngaphambi kokuba iinqwelomoya zorhwebo ziqalise ngelixa i-Boeing kufuneka ifake isofthiwe eyongezelelweyo kunye namacandelo.
I-United States ivumele iinqwelomoya ukuba ziqalise kwakhona ngoDisemba ka-2020 emva kokuba kwenziwe uhlengahlengiso oluthile lwesoftware kunye neengcingo. I-European Union inike imvume yayo ngoJanuwari. IBrazil, iKhanada, iPanama, neMexico, kunye neSingapore, iMalaysia, iIndiya, iJapan, iOstreliya neFiji nazo ziye zanikela imvume yazo.
“Isigqibo se-CAAC sisiqalo esibalulekileyo ekubuyiseleni ngokukhuselekileyo 737 MAX ukuya kwinkonzo e-China, utshilo u-Boeing, esongeza ukuba isebenza nabalawuli "ukubuyisela inqwelomoya ukuba isebenze kwihlabathi liphela."
Ngo-2020, i-China yafumana i-US ukuba ibe yeyona ntengiso inkulu yezophapho emhlabeni, ngokweZiko ledatha ye-Aviation.